Fitantarana manokana 2010: Fihazam-baovao toekarena manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2019 6:20 GMT
Nanomboka ny 19-25 Aprily 2010, nandray anjara tamin'ny “fihazam-baovao” tao amin'ny tranonkala NewsTrust ny ekipan'ny bilaogera ato amin'ny Global Voices izay nanaovan'ny mpikambana “jery todika” ny lahatsoratra avy amin'ny gazety sy bilaogy mba hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny filazam-baovao nomerika sy ny asa fanaovan-gazety tsara.
Nahitana ny Link TV sy ny Youth Noise ny mpiara-miasa hafa ary ao koa ny Sekoly Ambony Iraisam-pirenena any San Francisco sy ny Akademian'ny Haihain'ny Fitarihana any Philadelphia ihany koa. Nantevin-daharana avokoa izahay tamin'ny alàlan'ny fandefasana rohy mankany amin'ireo tantara avy amin'ny firenena samihafa ary nanao jery todika azy ireny.
Ahoana àry no ataon'ireo olona hiadiana amin'ny krizy ara-toekarena manerantany ? Ary ahoana no fomba hitantaran'ireo mpanao gazety sy bilaogera io tantara io?
Azo natao ny nanatevin-daharana ny Fihazam-baovao momba ny Toekarena manerantany nivoaka isa-kerinandro ity sy nanampy tamin'ny fitantarana tsara indrindra (sy ny ratsy indrindra) momba ity lohahevitra ity. Manana torolàlana mahasoa momba ny fomba fanaovana jery todika ny tantara ihany koa ny News Trust .
1 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana